Chii chinonzi BPA uye chii chakakosha? | Ehupfumi Zvemari
Chii chinonzi BPA uye chii chakakosha?
Vashambadziri vadiki nepakati vangave vakasangana nechidimbu cheBPA kanopfuura kamwe chete, asi vangangodaro vasingazive kuti zvinorevei chaizvo uye nekukanganisa kwavangaita pamabasa avo mumisika yemari. Zvakanaka, BPA haisi chinhu chakaderera pane chirevo che mihoro pamugove. Icho chimwe cheiyo variables inonyanya kushanda pakuisa mari muzvivigiro zvinoumba indices dzestoko. Kunze kwenzira dzehunyanzvi dzaunoshandisa kuita mari kuchengetedza mukutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya. Icho chikamu chakanangana neruzivo kuitira kuti iwe ugone kuvhura zvigaro kubva zvino zvichienda mberi.
EPS kana mibairo pamugove zvinonyanya kuve nekuita kuverenga pane chikamu che mambure purofiti yekambani yakagovaniswa pakati peimwe neimwe yezvikamu izvo zvinoumba huwandu hwesitoko yemari yekambani. Mhedzisiro yeiri nyore oparesheni ichave iyo yekupedzisira ichaona kuti ndeipi mibairo pamugove. Zvichava nyore kuverenga, uye pachinzvimbo pane zvakawanda mabhenefiti ayo aanogona kuburitsa mukushandisa kwayo. Pamusoro pazvose nekuti iri musiyano iwe waunogona kuseta kuti usarudze kuumbwa kwesimba rako rekudyara. Sezvo huwandu hwakanaka hwevatengesi vanoita kuti vaite mabasa avo mumisika yemari.
Saka kuti iwe unzwisise zvirinani zvirinani uye haugone kuitisa izvi kuverenga hapana zvirinani kupfuura kuburikidza nemuenzaniso kuti unzwisise nenzira kwayo. Zvakanaka, kana kambani iine purofiti yemari inosvika mazana mashanu emadhora, uye guta rayo rinoumbwa ne500, EPS inoenderana kana mubhadharo wega wega unowirirana ne1.000 euros pamugove. Mune ese kesi mune akakosha, BPA yakasiyana uye kukosha kwayo kunosiyana zvichienderana nekuti paramende iyi yakakwira here kana idiki. Iwe unogona kuita enzaniso pakati peiyo purofiti iyo iriko mumitengo yeindekisi yemisika yemari.
1 EPS: ichi chiratidzo
2 Kukosha kwehuwandu hwayo
3 Zvakanakira iyi paramita yemusika wemari
4 Ukama nePER
5 Zvakanakira pamusika weSpanish wemusika
EPS: ichi chiratidzo
Pamusoro pazvose, mihoro pachikamu ndiyo chiratidzo chekuisa mari mumusika wemasheya. Nekuti ichave yakakosha mune zviitiko apo govera zvikamu kune avo vagovana navo. Kusvika padanho rekuti iro rinogona kukupa iwe wakashata zano pamusoro pekuti iwo muripo wavo unogona kunge uri sei munzvimbo dzinouya. Sezvazviri zvine musoro kufunga, iyo mibairo pamugove inovandudzwa gore rega rega zvichienderana nemhedzisiro yekambani. Chero kuwedzera icho kana kupikisana kuchideredza kukosha kwayo. Ichowo chiratidzo kune iyo chaiyo mamiriro yekambani yakanyorwa.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti ndeimwe yekuverenga kunoshandiswa nevashambadzi mumusika wemasheya. Uye zvakare, ine hukama hunoshamisa neimwe yeanonyanya kushandiswa mazita mune ino kirasi yekushanda, iyo PER. Mupfungwa iyi, EPS inoonekwa seimwe yezvakakosha parameter kuona kuti mutengo ndeupi mugove wekambani uri. Iyo ndiyo mushure mezvese inosarudza kukosha kwayo mumisika yemari. Kunyangwe ichave iri nyore kwazvo kuti inofambisirwa nedzimwe musiyano yehukuru hwekuita mukuita. Kupa chengetedzo huru kusarudzo iwe yauchatora kubva zvino zvichienda mberi.
Kukosha kwehuwandu hwayo
Chero zvazvingaitika, haisi dhata chaiyo yekuita mashandiro mumisika yemari. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinogona kunge zviri izvo kuti maviri kana anopfuura makambani anopa iwo iwo iwo muhoro mugove, asi mune mamwe kesi dzinoda kuedza kukuru mumhedzisiro kusvika kune ino nzvimbo. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei BPA ichifanira kuwedzerwa nedzimwe nzira dzekuongorora. Hazvishamisi kuti zvinogona kuve zvakaoma kuti iwe unokwanisa kuona zvarinoreva zvechokwadi. Kana kungozvisiya uchitakurirwa nezvakakurudzirwa nevamwe vamiririri vezvemari.
Mibairo pachikamu, kune rimwe divi, chakakosha rubatsiro kuti uzive kana mutengo wekambani wakachipa kana zvinopesana zvinodhura. Semhedzisiro yechinhu chakakosha ichi, inogona kukubatsira iwe mune yemari pfuma iyo inogona kuve inobatsira kupa mari yako. Nekuti iyo inokupa iwe isinganzwisisike chiratidzo nezve izvo iwe zvaunofanirwa kuita nguva dzese. Beyond the trend in which they are framed: bullish, bearish kana lateral. Ichashanda kuzadzikisa sarudzo yako munzira ine chinangwa. Pasina kuisa mari panjodzi nenzira isina basa.
Zvakanakira iyi paramita yemusika wemari
Kune akawanda mabhenefiti, iyo mibairo pamugove inogona kukuunzira iwe kubva ikozvino zvichienda mberi. Kunyangwe zvimwe zvakakosha zvakanyanya ndezve izvo zvatinokufumura pazasi kuitira kuti uzviise mukufunga kwako mune zvaunogona kuita mumusika wemasheya.
Iyo inoumbwa seimwe yeiyo nzira dzakachengeteka kupinda mumisika yemari. Nekuti, pakati pezvimwe zvikonzero, ivo vanokwanisa kukupa iwe inodiwa ratidziro yekusarudza akanakisa masheya kukosha panguva ino.
Iwo mukana wakanaka kwazvo wekutarisa hunhu hune wakareba rwendo kumusoro. Kunyanya, mashandiro anoitirwa panguva yepakati nepakati. Iko kukura kwayo kugona kunogona kuve kwakakwira zvakanyanya.
Ndicho kuchutera zvinopfuura kukosha kudzikisa sarudzo dzako dzekutenga. Hazvishamisi kuti ichave rubatsiro rwakakura kurasa nhevedzano yemaitiro ayo anga asiri iwo anonyanya kubatsira kuvhura zvinzvimbo mavari. Nenzira iyi, iwe unenge uchinge uchidzivirira mari yako nezviyero zvakakurisa zvekuchengetedza.
Iyo inoshanda seyakakwana mukwanisi kune kuisa zviratidzo izvo zvinopa mamwe eaya maitiro. Saka kuti mashandiro mumisika yequity asaisiya ichienda kune yekuvandudza. Uye zvakatonyanya kubva kumakambani akanyorwa ayo asiri mumamiriro akanakisa ekugashira kune ako anotevera kutenga pamusika wemasheya.
Pasina kupokana, ndechimwe chezvakanyanya kusarudzika zvaunazvo. Nekuti pakupera kwezuva izvo zvairi kukupa iwe ndeye ruzivo rwehutano hwebhizinesi nezve iyo yemari nhumbi kwaunoda kuisa mari yacho. Chinhu chakareruka, asi panguva imwechete chinodiwa.
Iyo PER, kune rumwe rutivi, ihwo hukama pakati pemutengo kana kukosha uye mibairo uye iri rimwe remazano anoshandiswa zvakanyanya mukuongorora kwakakosha kwemakambani, kunyanya iwo akanyorwa pamisika yemari. Hukama hwayo nemari yaunowana pazvikamu zvese zvinopfuura zvinoshamisa, sezvaungaona pazasi. Nekuti zvirizvo, iyo PER zvakare inowanzo kuratidza kuti kambani iri zvakachipa kana zvinodhura pane imwe nguva. Kune rimwe divi, yakanyorwa kambani ine yakakwira PER inogona kuratidza kuti kune zvakawanda zvinotarisirwa pamutengo wayo wemugove wekukoshesa mumakore anotevera.
Kana iwe uchida kuziva kuti chii chiri PER yemakambani uko iwe kwaunoda kuisa mari yako yemari mipiro, hapana chinhu chiri nyore pane kuumba mamwe akareruka kuverenga. Sechinhu chinobva pakupatsanura mutengo wako kotesheni pakati pemari inowanikwa pamugove iyo yaanopa munguva idzodzo. Mhedzisiro yacho ichave iri chaiyo PER iyo iwe uine iyo kukosha kweiyo bhegi. Kunyangwe iyo inogona zvakare kushandiswa kune mamwe marudzi ebhizinesi accounting. Kune rimwe divi, iyo PER pamwe chete nemari inowanikwa mugove inoumba zvikamu zviviri zvakakosha zvezivo kuona kuti kuchengetedzeka kwechibvumirano kunofanirwa kunge kusingafanirwe kuve kuita kuti mashandiro edu pamusika wemasheya abatsire.
Zvakanakira pamusika weSpanish wemusika
Chero zvazvingaitika, kuchengetedzwa kwakabatanidzwa mumusika unoramba uripo kunopa EPS inopa kushamisika kusinganzwisisike. Nekuti inopa zvimwe zvakanaka zvinoitika zvine chekuita nebazi rekuvaka uye mamwe emari masangano. Kusvika padanho rekuti iri kupa imwe pfungwa kuti iwe ugone kuvhura zvinzvimbo, pasina kuzviisa panjodzi dzakanyanyisa. Nekuti ivo vari kutaura kuti yavo yazvino mutengo wekutenga unobatsira kwazvo kune zvako zvaunofarira. Ipo irimo mune imwe nhevedzano yezvikumbiro, kukosha kwavo panguva ino hakusi mitengo yakaderera yezvikamu zvavo. Izvi zvinokutendera kuti unyatso tsanangura nzira dzekudyara dzauchazoshandisa kubva panguva dzino chaidzo.
Kune rimwe divi, hauzive here kuti kune mamwe anobatsira zvikuru anodzokororwa EPS kumakambani eSpanish asina kuisirwa mune yakasarudzika indekisi yeSpanish equities? Nekuti zvirokwazvo, mhiri kweIbex 35 Iwe unogona zvakare kuwana iyo inofungidzira kwazvo purofiti pamugove kuti ikupe iwe unopfuura mufaro mumwe kubva panguva dzino. Kunyangwe madiki kana epakati-cap akanyorwa makambani ari mumamiriro akanaka emari. Saizvozvowo kuti iwe ugone kutenga masheya avo uye kutora mukana pazvinogona kuwedzera izvo zvinogona kukura muzvikamu zvinotevera zvekutengesa.
Nekuti kubva pakuwongorora kwemihoro pagove zvichave nyore kwazvo kuona iyo chaiyo mikana yebhizinesi inogadzirwa neenyika equities. Uye izvo hazvigone kuwanikwa nemamwe marongero anotungamirwa nehunyanzvi kuongorora. Kunyangwe zvimwe zvezvirevo izvi zvichiri kukanganiswa nedonntrend iri kuda kumira pasina nguva. Ehezve ivo vachave sarudzo dzinobatsira zvikuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Chii chinonzi BPA uye chii chakakosha?
Zvikwereti zvisina mubhadharo: zvinoita here?
Ndeipi isingabatsiri pension pension?